အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဂျာမန်ဘောလုံးကစားသမားများ အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' အဆိုပါဂျာမန်ဇီဒန်း ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအတွက်မှတ်တမ်းများကူညီရန်နှင့်စွမ်းရည်အောင် play အိုဇေးရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောအစေးအပြင်ဘက်တွင်သူ၏အသက်တာစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲစတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဘ0အစပိုင်း
အိုဇေး ဂျာမဏီ Mustafa Ozil (ဖခင်) နှင့် Gulizar Ozil (မိခင်) အား, Gelsenkirchen အတွက်အောက်တိုဘာလ 15, 1988 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူလေးကလေးသည်အကြားနောက်ဆုံးကလေးကမွေးဖွားခဲ့သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်သူတူရကီနွယ်ဖွားတစ်ဦးလေ့ကျင့်မွတ်စလင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အနှစ်သာရမှာတော့သူသည်အဘယ်သူ၏မိဘများလူဝင်မှုများမှာမွတ်စလင်ဂျာမန် Turk ဖြစ်ပါတယ်။ Mesut ရဲ့ခမ်းနားမိဘတွေကဂျာမဏီရဲ့ Ruhr စက်မှုဇုန်ဗဟို၌ပိုကောင်းတဲ့လူနေမှုရဖို့တူရကီကနေဂျာမနီမှမြေများနှင့်သမုဒ်မှတဆင့်ရွှေ့ပြောင်း။
အိုဇေးဟာအလွန်ဆင်းရဲသောသူသည်နေအိမ်ထဲကနေကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သူ၏ဘဝချွတ်စတင်ခဲ့သည်။ သူကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း 70% ကျော်ရှိရာဂျာမန်စက်မှုကျဆင်းမှု၏ကာလအတွင်းမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့မိဘ, အရှင်ရွေ့လျားမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ဦးလေလံအတွက်တယောက်ကိုတယောက်အနိမ့်ပေးဆောင်ခြင်းအလုပ်ကနေရုန်းကန်။ မိမိအရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရပ်ကွက်အတွင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်သောကန့်သတ်လူမှုရေးမိုဘိုင်းနှင့်အများအပြားစွန့်ပစ်တိုက်ခန်းလုပ်ကွက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့သည်။
ဤအစိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်း Mesut အောင်မြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကမှာမိမိလက်ကို တင်. အားလုံးသည်အရာဘောလုံးကစားခြင်းကိုစတင်သည်သူ၏ပညာရှင်များမှသူ၏ရှာပုံတော်မှစတင်ကာ .. ကောင်းကောင်းသွား၏။ စာသား, Mesut ဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေတစ်ခုထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းအဖြစ်ဘောလုံးကွင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သူနီးစပ်သူ၏နေအိမ်တွင်အားမိမိအကြိုက်ဆုံးကစားကွင်းပေါ်မှာကစားစတင်ခဲ့သည့်အခါဘောလုံးအဘို့သူ၏မေတ္တာစတင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာအိုဇေးဘောလုံးကန်နှင့်အတူဒါအစွဲအလမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကြိုးစားခဲ့သောအခါသူအိမ်ကယူနဲ့သူ့အိပ်ရာပေါ်ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကအိပ်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သူသည်မိမိအအစ်ကိုဖြစ်သူကိုသူ့အဘို့ dribbles လုပ်ဆောင်စောင့်ကြည့်တာကိုအချိန်နေခဲ့ရသည်။
ကြီးပြင်းသူသာကစား၏ပျော်စရာအဘို့အဘောလုံးချစ်တဲ့ကသူ၏အစ်ကိုဖြစ်သူ Mutlu ထံမှဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးယူခဲ့ပါတယ်။ Mutlu သည်သူ၏ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခြေအနေတစ်စုံတစ်ဦးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာလုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့, အိုဇေးရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရပ်ကွက်အတွင်း (တဝိုက် 16,000 မြို့သားတစ်ဦး scruffy ဆင်ခြေဖုံး) ပါရမီဘောလုံးသမားတစ်ဦးမွေးမြူရေးမြေပြင်အဖြစ်ရှုမြင်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဘောလုံးမှအဆိုပါ Start ကို
အိုဇေးအဖြစ်မကြာမီသူကဆင်းရဲတွင်းထဲကရရန်သေချာလမ်းခဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ်ဘောလုံးတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူအတွက်မိတ်ဆွေများကိုတွဲပြီးသည်သူ၏ဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့နောက်တော်သို့လိုက်သည်သူ၏ကျောင်းရဲ့ဘောလုံးပါဝင်သဖြင့်အထဲကစတင် "မျောက်ကေ့" မိမိအရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရပ်ကွက်အတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ် (ခြံစည်းရိုးကဝိုင်းဒေသခံတစ်ဦးအစေး) ။
ဒါဟာခဲ့ '' မျောက်လှောင်အိမ် '' Ozil ရဲ့ရေဒါသွားတာကျွမ်းကျင်မှုပထမဦးဆုံးတီထွင်ခဲ့။ ဤသည် Gelsenkirchen ၏ဂျာမန် Bismarck ခရိုင်အတွင်းရှိဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အိုဇေးကွင်းမှာရှိပါလိမ့်မယ် '' နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကနေ, ဆီးနှင်းသို့မဟုတ်မိုဃ်းကိုရွာစေဖြစ်စေ '', သူ့အစ်ကို Mutlu အရသိရသည်။
အတှေ့အကွုံမှရရှိခဲ့ "မျောက်ကေ့ဘောလုံး" မိမိအရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရပ်ကွက်အတွင်းအပြင်ဘက်ပိုကြီးအသင်းများအတွက်အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုတွေရတဲ့သူ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာသူသည်မိမိကျောင်းရဲ့မူလတန်းဘောလုံးအသင်းသို့တရားဝင်စာရင်းသွင်း။
Mesut ကောလိပ်ဘောလုံးအဆင့်ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့တစ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူမှ၎င်း၏လူငယ်အဆင့်ကနေတိုးတက်။ မိမိအအလယ်တန်းကျောင်းထက်ပိုမို 1,400 ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျာမနီမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာအလွန်အမင်းမျက်နှာသာခဲ့နေဆဲကျောင်းကိုယ်စားပြုရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
Joachen Herrmann, Ozil ရဲ့အလယ်တန်းကျောင်းတွင်လက်ထောက်အကြီးအကဲအဖြစ်ဘောလုံးကွင်းနှင့်အတူငယ်ရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ညှို့ဖော်ပြထားတယ် '' နည်းနည်း autistic '', ဖြည့်စွက်: '' အစဉ်မပြတ်ငါသူကိုတောင်အိပ်ရာမှဘောလုံးကို ယူ. ခံစားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ''
မိမိအကောလိပ်စာသင်ခန်းပြတင်းပေါက်ကနေ Ozil ဟာ Veltins-Arena, မန်ယူရဲ့အိမျအားကစားကွင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအိပ်မက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကသူ့စိတ်ကိုပျံ့ကုန်အံ့သောအကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာသည်သူ၏ ပတျသကျ. အခွက်တဆယ်သကဲ့သို့, ကျောင်းဘွန်ဒက်လီဂါနှင့်အတူအနီးကပ်လင့်များရှိပါတယ်။
အဆိုပါကျောင်းသားတစ်ယောက် Ozil ဘောလုံးနှင့်အတူစွဲလမ်းခဲ့သည်။ ကြောင်းနေသော်လည်းသူလည်းကျောင်းမှာအသိဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Manuel Neuer သည်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဂိုးသမားကျောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျူလီယန် Draxler နိမ့်ခဲ့စဉ်ကသူသည်နှစ်အနည်းငယ် Ozil အထက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Benedikt Howedes နှင့်ယောလ Matip ကိုလည်းကျောင်းဘွဲ့ရဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းဘောလုံးကွင်းအသုံးအနှုန်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှေ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကတနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းလေ့ကျင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအများကြီး, နံနက်ယံ၌သုံးအစည်းအဝေးများ, ညဦးယံ၌သုံးခြင်းနှင့်ငါးကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Ozil တစ်ယူထားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်ပေမယ့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပွဲစဉ်ရက်ပေါင်းအပေါ်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲသွားတယ်။ '' ငါသည်အဦးဆုံးသောအကြိမ် Mesut မြင်လျှင်, ငါကသူ့အသက်အရွယ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ '' Krabbe, ကျောင်းဆရာကပြောပါတယ်။ '' သူကအစေးကိုချွတ်လူကန်လန်, အလွန်ငယ်၌လည်းငြိမ်ဝပ်ခြင်းရှိ၏။ ဒါပေမယ့်ဘောလုံးလယ်ပြင်ပေါ်သူက extrovert, အလွန်အကြီးမားဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက effect ကိုသူ့ရင်ဘတ်ထွက် puffs ။ "သူကကျနော်တို့ရဲ့အဖွဲ့၏စူပါစတားခဲ့ပါတယ်။ " ။ ''
ဒါဟာ Ozil သူဘောလုံးမှတဆင့်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အသိအမှတ်ပြုသော Gelsenkirchen ကောလိပ်မှာခဲ့ပါတယ်။ သူအဖြစ်မကြာမီသူအများကြီးအသိအမှတ်ပြုရတဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအများကြီးစစ်တိုက်ကြ၏။ သူကအစေးပယ်အလွန်ရှက်တတ်ဆိတ်သငယ်ဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။
မိမိဆရာတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ထား "Mesut တစ်လူအစုအဝေးရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းကျောင်းသားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကအမြဲကအရမ်းရှက်တတ်ခဲ့သည်။ သင်စေးအပေါ်သူ့ကိုမြင်ပါလျှင်အဲဒီမှာသူပေါက်ကွဲခဲ့သောကွောငျ့ကိုယ်တော်မူကား, အခြားသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုဘောလုံးကို Give, သူသည်အခြားသူတစ်စုံတစ်ယောက်ပါလိမ့်မယ်။ "
'' သူကတစ်ရှက်အားနည်းနေနည်းနည်းအရာကြီးပေမယ့် 25 မီတာရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း, အလွန်အစာရှောင်ပြေးဘောလုံးကိုသည်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြ၏ '' ကျောင်းကကလပ်နည်းပြ Ralf Maraun ကပြောပါတယ်. သူကဆက်ပြီး ... '' သူကတကယ့်လမ်းဘောလုံးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသုညမှဂိမ်း 12 ရည်မှန်းချက်များအနိုင်ရတစ်ချိန်ကငါမှတ်မိသေးတယ်။ Mesut 10 သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အခြားအသင်းရဲ့နည်းပြဖယ်ငါ့ကိုယူဆိုသည်ကား, "Next ကိုအချိန်, အိမ်မှာရွှေ့ပြောင်းဆိထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီး"။ ''
ကောလိပ်မှာ Bismarck ကနေရွှေ့ပြောင်းကောင်လေးလူကြိုက်အများဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိမိ ID ကိုရတယ်ဘယ်မှာကျောင်းများအတွက်ဂျာမန်ဘောလုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်တယ်မတိုင်မီဒါဟာတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး။ ဒီအပိုကြီးယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်ပါဝင်ရန်သူ့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီ။
Mesut သူ၏အသက်တာရဲ့ရည်မှန်းချက် nursing သည်အားလပ်ချိန်မှာနာရီမွှုပျနှံ။ ဆက်ခံပြီးနောက်သူလူတိုင်းနေဆဲရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူ့ကိုအောက်မေ့တဦးတည်းအရာကိုပြု၏။ ဒါကဖြစ်၏ ချစ်ရသူနဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဝေစု။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မိသားစုဘဝ
အိုဇေး၏မိသားစု Bismarck, ဂျာမနီ၏ခရိုင်မှာဘဝစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအများအားဖြင့်တူရကီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဂျာမနီမှာနေတဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မိသားစုတစ်နှစ် 1967 အတွက်အလုပ်သမားများဖြစ်လာရန်ဂျာမနီမှတူရကီကနေရွှေ့ပြောင်း။ နှစ်တွေ, သူတို့ကဆင်းရဲမွဲတေမှုနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့မိသားစုတစ်စု၏ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘောလုံးကွင်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူ Mesut ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကမသိမမြင်နိုင်သောစည်းစိမ်ဥစ္စာမှဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြင့်တက်ရှိသည်ဖို့သူ့မိသားစုကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောတစ်ခုတည်းသောတူရကီရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။
ဖခင်: Mustafa Ozil Ozil ၏ဖခင်သည်။ သူဟာ6နှစ်အရွယ်မှာသူ့ဖခင်နှင့်အတူဂျာမနီမှပြောင်းရွှေ့လာသောသူတစ်ဦးဒုတိယမျိုးဆက်တူရကီရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိမိသားကိုဘောလုံးထဲမှာကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်သူအလုပ်အကိုင်များ switched မီ, သူယခင်ကသတ္တုအလုပ်သမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့လူငယ်ကာလအတွင်းအရောင်းလူကို (ကြက်သားထွက်ပစ္စည်းများ) အဖြစ်ထွက်တော့တာပဲ။
သူကဘောလုံးထဲမှာကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်အိုဇေးသည်မိမိအဘ Mustafa ကသူ့မန်နေဂျာဖြစ်လာမှခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဤသည် ofcourse သူ့ကိုသူ၏အဟောင်းများကိုအလုပ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်ဘောလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ရန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကသူ့သားရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထံမှပိုက်ဆံတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငွေပမာဏကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
Mother: မစ္စ Gulizar Ozil အိုဇေး၏မယ်တော်သည်။ သူမသည်သူ၏အဓိကတာဝန်သူမ၏ကလေးတွေကိုရပျတညျခဲ့တဲ့အိမျတျောကိုဇနီးအဖြစ်ထွက်တော့တာပဲ။ သူမသည်ဂျာမနီမှာ၎င်းတို့၏ရွှေ့ပြောင်းရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အတူတကွသူမ၏နှင့်အတူတစ်ချိန်ကခဲ့ကြသည်သူအားလုံးကကံကောင်းရွှေ့ပြောင်းမိခင်အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ တစ်ဦးကခိုင်မာတဲ့မိခင် / သား Bond Mesut နှင့် Gulizar အကြားတည်ရှိနေ။
မောင်နှမ: အိုဇေးသုံးမောင်နှမရှိပါတယ်; အမည်ရ Mutlu Ozil, Nese Ozil နှင့် Dugyu Ozil ။
အစ်ကိုကြီး Mutlu Ozil ။ သူဟာတစ်ချိန်ကနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုက်စားသော်လည်းသူ၏စိတ်ကိုဖမ်းစားကျွမ်းကျင်မှု watchin စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသူတွေကိုဖျော်ဖြေဖို့မဘောလုံးကစားသူတစ်ဦးဘောလုံးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကရှေ့ကိုသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွန်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပေမယ့်တူရကီရွှေ့ပြောင်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာပါစေလိမ့်မယ်ဟုယုံကြည်ဘူး။ ယနေ့သူ stardom မှအိုဇေးရဲ့မြင့်တက်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ Mesut သူ့ထံမှစာရေးဘောလုံးသင်ယူခဲ့တယ်။ အဆိုပါ dribbling, ဖြတ်သန်းနှင့်ကစားကျွမ်းကျင်မှုအားလုံး Mutlu ကနေအစပြုပါတယ်။
အိုဇေးအမည်ရနှစ်ခုအကွီးအကဲအစ်မတွေရှိသည် ဖြစ်. , Nese Ozil (ညာ) နှင့် Dugyu Ozil (လက်ဝဲ) ။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်သူတို့ရဲ့အိုဇေးဖို့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် Nese (ဝေးညာ) တစ်ချိန်က Mesut ရဲ့ကိုယ်ပွားအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ကိုယျတျောသညျမိမိကိုချက်ချင်းခြင်းနှင့်တိုတောင်းအစ်မ Dugyu အများကြီးပိုနီးစပ်သည်။ stardom ၎င်းတို့၏အစ်ကိုရဲ့မြင့်တက်သည်သူ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့အစ်မတွေဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များအများကြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ယနေ့မိမိတို့၏ဘဝတာရှည်အိပ်မက်များတွေ့ကြံဖူးခဲ့ကြ။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: Reationship ဘဝ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာအိုဇေးချိန်းတွေ့ဘဝကိုရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည်။ သူကသူ့ကိုယ်သူအရှင်ပြိုကွဲဖို့ဦးဆောင်သည်, မိမိကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှပြောင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူမဟုတ်တဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးမှအများအားဖြင့်ဆွဲဆောင်တွေ့။
ချွတ်စတင်ကာအိုဇေးတစ်ချိန်ကဂျာမန်မော်ဒယ်သူသည်အန္နမာရီယာ, ရက်စွဲပါနှင့်ဖင်လန်ဘောလုံးကစားသမား Pekka Lagerblom မှယခင်ကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့သိရသည်။
Ozil အတူတက်ခြိုးဖောကျပွီးနောကျ, သူမယခု Bushido အမည်ရှိဂျာမန်ရက်ပ်ချိန်းတွေ့သည်။
Mesut လည်း Aida Yespica, 2002 အတွက်အလှမယ်ဗင်နီဇွဲလားဖွစျလာသူတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှအလှမယ်မိဖုရားရက်စွဲပါ။
Ozil 2013 ကနေမန်ဒီ Capristo, အလုပ်အကိုင်ကအဆိုတော်ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပေမယ့်သူကအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမြင်လျှင်ခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို 2014 အတွက်အဆုံးသို့ရောက်ကြ၏။
သူကနောက်မှပြန်သည်သူ၏ဟောင်းရည်းစားနှင့်လူသိများအဆိုတော်မန်ဒီ Capristo နှငျ့သူ၏ဆကျဆံရေးသို့ရောက်ကြ၏။ အဆိုပါပြန်လည်ပြည်ထောင်စုနိုဝင်ဘာလ 2015 အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခွဲခြာပြီးနောက်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရည်ရွယ်သည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်နောက်တဖန်အတူပြန်ရောက်လာတယ်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ခမည်းတော်နှင့်ရန်ငြိုးထားခြင်း
Mustafa (Ozil ၏ဖခင်) မိမိခိုင်မာခြင်းအဘို့အလူသိများသည်။ သူကဇူလိုင် 2011 ရှိသူ၏သားရဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်လာသည်။ Mustafa မကြာသေးမီကအစားသူ့အစ်ကို Mutlu ကိုခနျ့အပျဖို့ Ozil ကဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်အခန်းကဏ္ဍ relinquished ။ ဒါကအဖေနှင့်သားများအကြားတင်းမာမှု၏အစကိုမြင်တော်မူ၏။ Mustafa Mesut ရဲ့ရည်းစားမန်ဒီ Capristo သည်သူ၏အေးဂျင့်အဖြစ်သူ့ကိုအရေးပေါ်သိမ်းထားဖို့သူ့သားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်ဆိုပါတယ်။
ဤသည်အများအပြားအဖြစ်ထိတ်လန်ကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်, Mustafa သူ့ကို sacking ပြီးနောက်မိမိသားကိုတရားစွဲဆိုဖို့သွားကြ၏။
အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရ; '' Mustafa Ozil နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသောလူကိုမဟုတ်ဘူး။ သူကအရမ်း Mesut အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူတစ်ဦးကြီးတွေအခွက်တဆယ်ခဲ့သိတယ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့သင်တန်း, တိုင်းပွဲစဉ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတတ်၏။ ဒါဟာသတ္တုမိုင်းကသူ့သားရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနောက်လိုက်ဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေးဆောင်မိမိအနိမ့်ကျဆင်းပြီးနောက်မိမိအသက်၏ဗဟိုဖြစ်လာသည်။ ''
ထွက် left ခံရစိတ်ပျက်ထဲကသူ့ဖခင်တရားရုံးရန်အိုဇေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီယူခဲ့ပါတယ်။ သူကသူ့ဆုံးရှုံးမှုအတွက်£ 495,000 လျော်ကြေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အိုဇေးသည်သူ၏လုပ်ရပ်များကတည်းကသူ၏ဖခင်မှမဟောခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ကခိုင်မာတဲ့ဥပဒေစစ်တိုက်ခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရတယ်ခံရဖို့ကဆိုပါတယ်သောဖခင်နှင့်သားကြားဆက်ဆံရေး။
မိမိအတောင်းဆိုချက်များကိုစောင့်ကြည့်ပေါ်၌အိုဇေး၏ရှေ့နေကိုလည်းဖခင်ဘာမျှလုပ်နေဘို့သူ့သားထံမှသိမ်းယူခဲ့ကာ£ 800,000 တစ်ပြန်လာတောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စတွင်နောက်ဆုံးမှာတရားရုံးပြင်ပမှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စကို၏သားရဲ့လမျးညှနျအောကျပါမိခင်နှင့်အတူတက်ခွဲဖို့အိုဇေး၏မိဘများတယ်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: တစ်ဦးကပြင်းထန်မွတ်စလင်ဒါပေမယ့် ...
အိုဇေးမွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသသူကစားရန်ရှိပြီးတိုင်းတစ်ခုတည်းပွဲမတိုင်မီကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် recites သူတစ်ဦး မှစ. ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောမူဆလင်များဖြစ်ပါသည်။ ဘာလင်အခြေစိုက်နေ့စဉ် "Der Tagesspiegel" ကိုပြောနေတာ, Mesut ကလည်း, ငါ (ထိုအစေးအပေါ်) မှထွက်သွားမီ "အစဉ်မပြတ်ငါကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အနေဖြင့်ရွတ်ဆို။ ဒါဟာအာရုံစူးစိုက်ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ငါ့ကိုတကယ်ကူညီပေးသည်။ ငါဆုတောင်းပဌနာနှင့်ငါ၏အသင်းကို-အိမ်ထောင်ဖက်သူတို့သည်ငါ၏ပဌနာစဉ်အတွင်းငါ့ကိုစကားပြောမရနိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏။ "
ထို့အပြင်သူအဖြစ်ကောင်းစွာဂျာမန်နိုင်ငံတော်သီချင်းစဉ်အတွင်း quran ထံမှကျမ်းပိုဒ် recites ။ သူသည်နိုင်ငံတော်သီချင်းသီခငျြးဆိုနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: တစ်ဦးကလေးအဖြစ်စစ်တုရင်ကစား
အိုဇေး play ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ စစ်တုရင် Gelsenkirchen, ဂျာမနီ၏ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရပ်ကွက်အတွင်းဖွင့်ကြီးထွားလာနေစဉ်။ ရုံဘောလုံးကဲ့သို့သူလည်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ်စစ်တုရင်ဖို့အဆင်ပြေအောင်။
သူကသူ့ကျောင်းရဲ့ဘောလုံးအသင်းနှင့်စစ်တုရင်ကလပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ Mesut လည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့သည် သင်္ချာအတတ်ပညာ ကျောင်းမှာ။ စစ်တုရင်နှင့်သင်္ချာအဘို့သူ၏မေတ္တာသည်သူ၏ဒေသခံစဉ်းစားတွေးခေါ်ဘို့လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ကစား၏လယ်ပြင်တွင်စွမ်းရည်အောင်ဆော့ကစားကြသည်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မသေနိုင်ခြင်း
ပရိသတ်တွေအများကြီးမေးခွန်းမေးမွနျးကွပွီ အိုဇေးနေိုငျဖွစျပါသညျ ?. ပရိသတ်တွေအများကြီးနှောင်းပိုင်းတွင် F1 ဒဏ္ဍာရီ, Enzo Ferrari ပြိုင်ကားရန်အာဆင်နယ်အဲဒီလူရဲ့ပုံသဏ်ဍာနျကျော်အရည်ပျော်ကျခြင်းကိုဆည်းပူးကြပါပြီ။
တောင်မှသည်မိမိရိုးရာအိုဇေး Enzo Ferrari ပြိုင်ကားများဝင်စားဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ Ozil 14 အောက်တိုဘာလ, 1988 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုဝင်စားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပျက်ရန်အဘို့အဖွင့်လုံလောက်သောအချိန်ပေးခြင်း - အီတလီမော်တာပြိုင်ကားမောင်းသူနှင့်လုပ်ငန်းရှင် 15 သြဂုတ်လ 1988 အပေါ်အနိစ္စရောက်လေ၏။ ဒါကသီအိုရီအကျောထောက်နောက်ခံ-Up ထားပြီးလူ့ဝိညာဉ်သည်ကောင်လေးအရွက်နှင့်သေသောနောက်ပြန်လည်မွေးဖွားသည်ကိုဆိုသညျကားသောဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် Taoist သွန်သင်ချက်အတွက်။ ဤသည်နယူးခေတ်ကလူအများကြီး Enzo Ferrari ပြိုင်ကား, Ferrari ပြိုင်ကားများ၏တည်ထောင်သူ, အိုဇေးအဖြစ်ဝငျစားကယုံကြည်သည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: သူဟာလူ့မဟုတ်ဘူး
မိမိအကူညီခြင်းမရှိမှတ်သားထားပါတယ်။ များစွာသောသူလူ့မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်နေပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ အိုဇေးလူသားမြားသညျကိုမွငျဖို့ခက်ခဲတွေ့သောအရာကိုမြင်သည်။ အောက်ကပုံထဲကကထေူ၏။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မေတ္တာ
Mesut လည်းမြောက်မြားစွာကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများမှငွေအမြောက်အမြားလှူဒါန်းတော်မူပြီးမှစိတ်ထဲသူ၏ပရဟိတကွေးများအတွက်ကျော်ကြားသည်။ သူကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2014 ဘရာဇီးကလေးတွေ၏ကုသမှုဆီသို့ဦးတည်သည်သူ၏တစျခုလုံးကို5ကမ္ဘာ့ဖလားဆုကိုပိုက်ဆံ (အကြောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 00, 000, 23) လှူဒါန်းခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ဆေးကုသမှုအောင်မြင်သောသွားလေ၏။ သူဟာဘရာဇီးလူမျိုး၏ပူနွေးသောဧညျ့ကျေးဇူးတင်၏လက္ခဏာသက်သေအဖြစ်ဤအမှုကိုပြု၏။ ဤသည်ကသူ၏ BigShoe စီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုလာမည့်ဘောလုံးသမားဖြစ်ဖြစ်ပျက်သောကုသဘရာဇီးကလေးတစျဦးမှလက်ဆောင်အဖြစ်ဖိနပ်တင်ဒါအားဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
2016 ၏မေလအတွက်, Mesut လည်းယော်ဒန်မြစ်၌အ Zaatari ဒုက္ခသည်စခန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် 80,000 အိုးအိမ်မဲ့ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းတော်မူသောပရိတ်သတ်များအဘို့အကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သူကဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်၏ရလဒ်အဖြစ်အိုးအိမ်မဲ့အမြိုးသားအဘို့သာဂရုစိုက်။ Ozil သည်တပ်အဖြစ်, ကလေးများနှင့်အတူကစားကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ဘောလုံးအင်္ကျီကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:သူ့မျက်လုံးအကြောင်း
သငျသညျအိုဇေးရဲ့မျက်စိ၏ရုပ်ပုံကိုကြည့်လျှင်, သင်ပုံရိပ်တစ်ခုငှါ ပုံရိပ် ချိုင်းရောဂါ (ခေါ်သိုင်းရွိုက်မျက်စိရောဂါ) မှခံစားနေရပြီးသူတစ်ဦးဦး၏။ ဒါပေမယ့်သူကထိုကဲ့သို့သဘာဝမဆိုခွအေနအေခံစားနေရပြီးမပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို Ozil တစ်ချိုင်းရောဂါဝေဒနာသည်မဟုတျပါဘူးထင်ပါစေသောသုံးမှတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
ပထမဦးစွာသူ၏မျက်စိမဆိုတင်ပြကြဘူး အမှတ်လက္ခဏာ နီခြင်းသို့မဟုတ် သည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများအခြေအနေကိုမှပုံမှန်။
ဒုတိယအချက်မှာချိုင်းရောဂါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကိုမကြာခဏ လာ. , go, ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်မှုအတွက်ယိမ်းတဲ့အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ Ozil ရဲ့မျက်စိတော်တော်တသမတ်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချိုင်းရောဂါကဲ့သို့သောအခွအေနေရှိသည်မယ်လို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ချို့ယွင်းသောရူပါရုံကို, ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ဝဒေနာ, သို့မဟုတ်မျက်မှောက်အရှုံးနဲ့တူ။ ဒါဟာတော်တော်လေးသိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာကစားမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားဖြစ်လာပါစေလိမ့်မယ်။
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:မိမိအစာအုပ်များ
တစ်ဦးကစာအုပ်အထံတော်သို့ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်။ ဒါဟာခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် "အိုဇေး Superstar စားသောက်ဆိုင်"။ ဤသည်အမည်မသိရှိနေဆဲသူ၏နာမကိုအခိုင်အမာဖူးသူတစ်ဦးအသည်းအသန်ပန်ကာတို့ကပြုလေ၏။
Mesut ကခစျြတျောမူနှင့်ပက်ကျိသည့်သူ့ကိုနောက်ထပ်ရေးဖို့သူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆို '' သည်ကြီးမြတ်သော Gunning ''.
အိုဇေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများနှင့်အောင်မြင်မှုများစာရင်း
(1) အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူသူ FA ဖလားသုံးကြိမ်အနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ (2013 နှင့် 14 အတွက် 2014-15, 2016-17, 2014,2015-2017) နှင့်အက်ဖ်အေကွန်မြူနတီဒိုင်း။
Real Madrid အသင်းနှင့်အတူ (2), သူသည်လာလီဂါ (2011-12), အ Copa del Rey (2010-11) နှင့် 2012 အတွက်စူပါက de Espana အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဝါဒါဘရီမင်နှင့်အတူ (3), သူသည် DFB-Pokal (2008-09) အနိုင်ရခဲ့သည်။
ဂျာမနီနှင့်အတူ (4), သူသည်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား (2014) နှင့်ယူအီးအက်ဖ်အေဥရောပလက်အောက်တွင်-21 ချန်ပီယံရှစ် (2009) ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခြားသတင်းများ Award လည်းပါဝင်သည်
2011, 2012, 2013 နှင့်တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကို၏ 2015 ဂျာမန်ကစားသမား
(ဂါနာ vs) ကိုပွဲစဉ်၏ 2010 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားက Man
2010-2011 ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ်ထိပ်တန်းအကူအညီအတွက် ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို နှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်
J ကိုများအတွက် 2011-2012 လာလီဂါထိပ်တန်းကူညီပံ့ပိုးမှုose မော်ရင်ဟို နှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်
2015-2016 ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်တန်းအကူအညီအတွက် အာဆင်နယ် နှင့် Asernal
အားဖြင့်ရာသီ၏ 2015-2016 Player ကို လက်နက်တိုက်
ဥရောပ Award ဆုအတွက် 2012 ယူအီးအက်ဖ်အေအကောင်းဆုံးကစားသမား (10th ရာအရပျ)
Ozil Mesut 28:2018 pm မှာဇွန်လ 1, 39
ဂျပန်နိုင်ငံဟွန်ဒါ Keisuke သေမယ့်ရောဂါခံစားနေရပြီးအနေဖြင့်ကမ္ဘာကစံ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားဆိုပါတယ်ဒဏ်ငွေလုပ်နေတာခံရဖို့ပုံရသည်။
Asu အဘိဓါန် 25:2018 pm မှာအောက်တိုဘာလ 5, 24
ဦးငါ၏အ favirite ဘောလုံးကစားသမား
ကက်သရင်း Scoon 29:2018 pm အချိန်ဒီဇင်ဘာလ 11, 35
သငျသညျ over-တပ်ပန်ကာကဲ့သို့မြည်။ အပြင်, အခုသူ Amin Gulse ချိန်းတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အမှန်တရားမှာသူ MY hubby ပါပဲ။
Arjen ရော်ဘင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်